एकाबिहानै आयो खुसिको खबर : नेपाली तरकारी बजारमा सोच्नै नसकिने गरि घट्यो आलुको मुल्य ! पूरा हेर्नुहोस – Life Nepali
एकाबिहानै आयो खुसिको खबर : नेपाली तरकारी बजारमा सोच्नै नसकिने गरि घट्यो आलुको मुल्य ! पूरा हेर्नुहोस
आलुको ब्यबसायी खेती हुदा उत्पादनमा बृद्धि हुनु र नयाँ आलु बजारमा आएसँगै मुल्य घटेक हो । हुम्लामा आलुको मुल्य सस्तिएको छ । सिमकोट गाउँपालिका वडा नम्बर १ अम्मरसिंह भण्डारीले हाल आलुको मुल्य प्रतिकेजी पैतीस रुपियाँमा बिक्री हुने गरेको बताए। *** यो समाचारको पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ****
ब्यबसायीक रुपमा आलु खेती गर्दै आउनु भएका भण्डारीले नयाँ आलु बजारमा नआउदासम्म प्रतिकेजी सत्तरी रुपियाँ पर्ने भएपनि नयाँ आएसंगै आधा मुल्य घटेको बताए । आलु खेती घरयासी प्रयोगका लागि गरिने भएको भएपनि पछिल्लो समय आम्दानी हुन थालेपछि आलुको ब्यबसायीक खेती सुरु भएको छ । *** यो समाचारको पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ****
हुम्लामा यो अबधि आलुको मुख्य सिजन सुरु भएको छ। ब्यबसायी आलु खेती गर्ने किसानको संख्या बृद्धि भएपछि प्रतिश्प्रर्धाका आधारमा आलुको मुल्य घटेको किसानले बताएका छन्। *** यो समाचारको पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ****
Previous टिपरले मोटरसाइकललाइ ठक्कर दिंदा २ जनाको मृ,त्यु
Next नेपाली सेनाका सि,पाहीले आफैलाई हा,ने गो,लि